प्रविधि मित्र कि शत्रु ? - Butwal Online
प्रविधि मित्र कि शत्रु ?
भक्तपुर, १५ जेष्ठ
विश्वमा सबैभन्दा बढी क्ष्लतभचलभत को प्रयोग हुने देश चिनमा सन २००६ मा मनो चिकित्सक टाओ रन (त्बय च्बल० ले एउटा यस्तो संस्था स्थापना गर्नुभयो जसको उद्देश्य क्ष्लतभचलभत को अधिकतम प्रयोगका कारण उत्पन्न भएका समस्याहरुको हल खोज्नु थियो ।
यो संस्थाको स्थापना भए पश्चात अध्ययनका क्रममा केटाकेटीहरु क्ष्लतभचलभत प्रयोग गर्दा, क्ष्लतभचलभत मा गेम खेल्दा त्यष्भित जान नपरोस भनेर डाइपर लागाएर नै बस्ने गरेको सम्म भेटिए पछि यसलाई मष्नष्तब िबममष्अतष्यल को संज्ञा दिदै क्ष्लतभचलभत मभतयहषष्अबतष्यल केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने नतिजामा पुगे पछि हाल चिनमा क्ष्लतभचलभत मभतयहषष्अबतष्यल केन्द्र सञ्चालनमा छ ।
यो केन्द्रको काम भनेको अयmउगतभच, ःयदष्भि उजयलभ लगायतका विद्युतीय साधनबाट क्ष्लतभचलभत को प्रयोग गरी उत्पन्न भएका समस्याहरुको निराकारण गर्नु हो । आज उक्त संस्थामा १३ देखि २५ वर्ष उमेर समुहका युवाहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको पाइन्छ । श्रोतः https://www.dailymail.co.uk यो एउटा उदाहरण मात्र हो । आज हामी जसरी भए पनि बाँच्नु पर्ने र बाँच्नको लागि कमाउनु पर्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित छौ ।
घरमा घरका सदश्य जस्तो नभई घर भित्र पस्दा पनि व्यवसायिक शैलिमै पस्छौ । हाम्रो व्यस्तता यति बढेको छ कि भर्खर जन्मेको नानीलाई खाना खुवाउनको लागि आमालाई मोबाइल फोनको सहारा लिनु परेको छ । समय दिएर आफुँसँग घुलमिल गराएर नानीहरुका कुरा सुन्दै उनीहरु सँग गफ गर्दै बस्न हामीलाई फुर्सद छैन । केटाकेटी अल्मल्याउन, फकाउन वा काम गराउन आज हामी मोवाइल फोनको लोभ देखाउदैछौ ।
आज घर घरमा प्रविधि समस्या भएर भित्रिदै छ । यदि यस्तै अवस्था रहेमा एक दिन हामीले पनि आफ्ना नानीहरुको लागि सुधार गृह खोज्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
प्रविधिको विकास जीवनलाई सहज बनाउनका लागि भएका हुन । यसकारण हामीसँग भएका प्रविधिहरु हाम्रा मित्र हुन । तर प्रविधिलाई उचित प्रयोग गरेमात्र यिनीहरु हाम्रा मित्र रहन्छन् अन्यथा यि भन्दा डरलाग्दा शत्रु अन्यत्र खोज्नु पर्दैन । प्रविधि दुरुपयोगका कारण हामीले कल्पना पनि गर्न नसक्ने डरलाग्दा अवस्थाहरु श्रृजना हुन्छन ।
त्यसैले त यसलाई म्ष्नष्तब िज्भचयष्ल को संज्ञा दिइएको छ । हाम्रा नानीहरु आज यसैको लतमा दिन प्रति दिन फस्दै गइरहेका छन् । म्ष्नष्तब िज्चयष्ल को कारण उत्पन्न हुने समस्याहरुलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ । प्रविधि जीवन र जगतलाई सहज बनाउनका लगि विकसित भए तापनि प्रविधिका उच्चतम विकास भनेर चिनिने मोबाइल फोन र कम्प्युटरको उपयोग भन्दा दुरुपयोग बढ्दै गएको कारण यसले जीवन र जगतलाई नै दीर्घकालीन असर पुर्याउने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । म्ष्नष्तब िज्चयष्ल को कारण हाल देखिएका समस्याहरुलाई निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ ।
शारीरिक समस्या ः
मोबाइल तथा कम्प्युटरको माध्यमबाट इन्टरनेट तथा गेमको अत्याधिक प्रयोगका कारण विशेषत ६ देखि १८ वार्ष उमेर समुहका केटाकेटीहरुमा विभिन्न खालका शारीरिक समस्याहरु देखिन थालेको पाइन्छ । ढाड तथा टाउको दुख्ने, अनिन्द्रा तथा आँखाको समस्या, अति मोटोपन वा अति दुब्लोपन, पाखुरामा दुखाइ जस्ता शारीरिक समस्याहरु यो उमेर समुहका नानीहरुमा देखिन थालेका छन् ।
मानसिक समस्या ः
म्ष्नष्तब िज्चयष्ल को कारण आम मानिसमा नै नकारत्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरुको दुरुपयोग बढ्नाले केटाकेटीहरुमा डरलाग्दो मनोसामाजिक समस्याहरु देखिन थालेका छन् । चिन्तिन रहनु, कामको प्राथमिकता छुट्टयाउन नसक्नु, प्रतिसोधात्मक भावना जागृत हुनु, डराउनु, विचारमा स्थिरता नरहनु, दोषि महसुस गर्नु, समयको ख्याल राख्न नसक्नु र विस्तारै तनावमा पर्नु जस्ता समस्याहरु आजका नानीहरुमा देखिन थालेको पाइन्छ । यसका साथै साथीभाइ, छिमेकी र घरपरिवार संग नै घुलमिल हुन नसक्नु र विस्तारै एक्लो जीवन तिर बढ्दै अकल्पनिय दुर्घटनाको सिकार बन्न पुग्छन् ।
प्रविधि प्रगतिको साधाक हो बाधक होइन । आज हामी हाम्रा नानीहरुलाई साधन मात्रै दिदै छौ । प्रविधि संगसंगै प्रविधि प्रयोगको पद्दति पनि दिन आवस्यक छ । प्रविधिमात्र दिएर पद्दति दिन नसक्दा नानीहरु उपयोग भन्दा दुरुपयोग तिर उन्मुख हुदैछन् । यसका लागि अभिभावक स्वयम जागरुक र जिम्मेवार बन्न आवस्यक छ ।
घरलाई घर बनाऊँ ः
आज हामी घर छिर्दा बुबा, आमा, दिदी, दाजु नबनी व्यवसायिक हैसियतमा नै छिर्छौ । नानीहरु नजिक आउन, खेल्न खोज्छन तर हामीसंग त्यसकालागि समय छैन । हामी इन्टरनेट प्रयोग तथा मोबाइल प्रयोगमा व्यस्त हुन्छौ । नानीहरु आमा बुबाबाट थाहै नपाइ विस्तारै अलग्गिन पुग्छन । त्यसैले घरलाई घर जस्तो बनाऊँ, व्यवसायिक प्रतियष्ठान जस्तो होइन ।
समय व्यवस्थापन गरौं ः
व्यस्तता बाध्यता हो । जतिसुकै व्यस्त भए पनि नानीहरुको लागि नानीहरु संग खेल्ने, घुम्ने, संगै खाना खाने, कुराकानी गर्ने र उनीहरुका कुराहरु सुन्ने समयको व्यवस्थापन गरौ जसका कारण नानीहरुले व्यवहारगत ज्ञान र सीप हासिल गर्नुका साथै पारिवारिक जिम्मेवारीको वोध गर्ने मौका पाउँछन् । उनीहरुसंग विताएको समयले उनीहरुमा आमा बुबा प्रति सम्मान भाव जागरण हुन्छ । मित्रवत व्यवहारका कारण आफ्ना अन्तरंगहरु निर्धक्क संग खोल्न सक्छन जस्ले गर्दा समयमा नै समस्याको पहिचान गरी निराकरण तिर अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
चर्चा गरौ ः
प्रविधि दुरुपयोगका कारणले हुन सक्ने दुर्घटना सन्र्दभमा खुलेर चर्चा गरौ । इन्टरनेट सञ्जालबाट हुने फाइदा र बेफाइदाका सन्दर्भहरु नानीहरुलाई सिकाऊँ । साधनको प्रयोग गर्दा कसरी उत्तरदायी तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, दुरुपयोग गरे के कस्ता दुर्घटनाहरु हुन सक्छन भन्नेकुराको चर्चा समय समयमा परिवारका सदस्यहरु संगै वसेर गरौ । साधनको सदुपयोग कसरी गर्ने, कुन साधन केको लागि हो भन्ने कुरा आफु पनि सिकौ नानीहरुलाई पनि सिकाऊँ ।
हाम्रा नानीहरु भविष्यका कर्णधार मात्र होइनन् उनीहरु त आजका साझेदार पनि हुन । उनीहरुका लागि आमाबुबाले दिने भनेको समय र संस्कार मात्र हो । यस विषयमा हामी आमा बुबा बेलैमा सचेत हुन सके हामी र हाम्रो समाज सक्षम, सवल र संंस्कारयुक्त हुने छ ।